जनतामा आशा र विश्वास पलाएको छ, निराशा र आक्रोसमा परिणत नहोस्| Nepal Pati
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको छ । गत असोज १७ गते जसरी चुनावी तालमेल र वाम एकता अभियान घोषणा गरिएको थियो, ठीक त्यसैगरी अनेक खाले टिप्पणी भइरहेका बेला पार्टी एकताले अन्तिम रुप पायो । असोज १७ गते निर्णयलाई जनताले निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरेपछि दुई दललाई एकताका लागि थप सहज भयो । यो एकता कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि एउटा ऐतिहासिक महत्वको घटनाक्रमको हो । कम्युनिष्ट पार्टीलाई मात्र होइन, यसले सिंगो राजनीतिमा नै दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । एकता घोषणा सभामा दुवै अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धितर्फको यात्राका लागि एकता ऐतिहासिक भएको बताएका छन् ।
तीनै तहको सरकारमा एकल बहुमत
नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका तीनवटै तहका सरकारमा नेकपाको एकल बहुमत छ । यसअघि संयुक्त सरकार थियो अव एकल भएको छ । प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये एक सभामुख र एक उपसभामुखसहित नेकपाका १७४ सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ४२ जना नेकपाका सांसद छन् । प्रदेश २ मा बाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वको सरकार छ । प्रदेश २ बाहेक सबैमा नेकपाकै बुहमत छ । प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्यमध्ये ३ सय ५१ जना नेकपाकै सांसद छन् ।
स्थानीय तहमा पनि नेकपाका जनप्रतिनिधिकै बाहुल्य छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहका झन्डै ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिमा १९ हजारभन्दा बढी नेकपाका छन् । स्थिर सरकारको नारा दिएर निर्वाचनमा होमिएका दुई दलले एकताबाट जनताको भावनाको कदर गरेका छन् । नेकपा गठनपछि जनतामा आशा र विश्वास पलाएको छ । त्यसलाई उत्साहमा परिणत गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । यदि त्यो आशा र विश्वास निराशा र आक्रोसमा परिणत भयो भने त्यसले नसोचेको परिणाम निम्त्याउने छ । त्यसकारण यी र यस्ता विषयमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
१. प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले सवैतिर एकल बहुमत भएकाले सही नीतिका साथ राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । एकतालाई जनजीविका र राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती पार गर्न त्यति सजिलो छैन् । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिका लागि पार्टी एकता गरेको तर्क नेकपाको छ ।
२. पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको भावनालाई एकीकृत गर्न सकिएन भने एकताले खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । गुटगत राजनीति संस्थागत भयो भने पार्टी एकता सार्थक बन्न सक्दैन । पार्टीका आन्तरिक गुटउपगुटले राज्यसत्ता नै हल्लाएको तीतो इतिहास ताजै छ ।
३. स्थिरतासहित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा नियन्त्रण गरेको नेकपाले निर्धक्कसँग विकास र आर्थिक समृद्धिसहित आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची, सामाजिक न्यायका नीति लागू गर्न सक्नेछ । यो अवसरसँगै ठूलो चुनौती पनि हो ।
४. केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै नेकपाको सरकार छ । अब विगतमा जस्तो कसैलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन । केन्द्रमा ओली र प्रचण्डले भन्दैमा कुृनाकाप्चाका जनताले सेवा सुविधा सहज रुपमा पाउने होइनन् । त्यहीको स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । तर, एक वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने स्थानीय तहले उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको गुनासो छ–केन्द्रले आवश्यक सहयोग गरेन ।
५. भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गराउन सक्नुपर्छ । यदि विगतदेखि चल्दै आएको सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको अवस्था बन्यो भने प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।